ကင်ဆာကြောင့် သေဆုံးမှုတွေကို ရပ်တန့်နိုင်ဖို့ ပိုမိုနီးစပ်လာပြီလား?
ကင်ဆာရောဂါကုသရေးအတွက် ဆေးပညာနယ်ပယ်မှာ အရေးပါပြီး စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းလှပါတယ်။
ကင်ဆာဆိုတဲ့ ရောဂါအမည်ကြားရတာနဲ့ လူတွေကြောက်ရွံ့ကြပါတယ်။ အရင်ခေတ်တွေမှာဆိုရင် ကင်ဆာဖြစ်နေပြီလို့ စစ်ဆေးသိရှိရသူတွေဟာ သေမိန့်ကျသလိုပဲ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့ တိုးတက်လာတဲ့ ဆေးဝါးနဲ့ကုထုံးတွေကြောင့် ကင်ဆာရောဂါသည်တွေဟာ ကုသနိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ အရင်ထက်ပိုပြီး ရှိလာခဲ့ပါပြီ။
ဒါပေမဲ့လည်း ကင်ဆာရောဂါဟာ လူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကို အခြိမ်းခြောက်နိုင်ဆုံး ရောဂါဖြစ်နေဆဲလို့ ဆိုရမှာပါ။ ယခုနောက်ဆုံး သိပ္ပံပညာရှင်တွေ စမ်းသပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ ကင်ဆာရောဂါကြောင့် သေဆုံးရမှုတွေကို ရပ်တန့်ပစ်နိုင်မလားဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်ကို မြင်တွေ့လာရပြီလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံမှ သိပ္ပံပညာရှင်တွေ ထုတ်ဖော်ကြေညာခဲ့မှုအရ ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုကို စောစီးစွာသိနိုင်တဲ့ သွေးစစ်ဆေးမှုနည်းပညာကို စမ်းသပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီစမ်းသပ်မှုဟာ ကင်ဆာရောဂါကုသရေးအတွက် ဆေးပညာနယ်ပယ်မှာ အရေးပါပြီး စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းလှပါတယ်။
ဂျွန်စ်ဟော့ပ်ကင်း တက္ကသိုလ်မှ (Johns Hopkins University) ပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က ကမ္ဘာမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကင်ဆာရောဂါ ၈ မျိုးကို စောစီးစွာ စစ်ဆေးသိရှိနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းကို စမ်းသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ စိတ်ကူးနဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က တစ်နှစ်တစ်ကြိမ် သွေးစစ်ဆေးမှုဖြင့် ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို အသက်အန္တရာယ်မရှိနိုင်သေးတဲ့ အဆင့်မှာပင် စောစီးစွာသိရှိနိုင်ပြီး လူ့အသက်တွေကို ကယ်တင်နိုင်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗြိတိန်မှ ပညာရှင်တွေက ယခု စမ်းသပ်မှုဟာ အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတယ်လို့လည်း ပြောခဲ့ပါတယ်။ ယခုတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ သွေးစစ်ဆေးမှုနည်းလမ်းဖြင့် ကင်ဆာရောဂါ ကနဦးအဆင့်မှာပင် ထိရောက်စွာ စစ်ဆေးသိရှိနိုင်ဖို့ နောက်ထပ် စမ်းသပ်မှုတွေ ဆက်လက် ပြုလုပ်ရအုံးမယ်လို့လည်း သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦးက ဆိုပါတယ်။
ပညာရှင်တွေရဲ့ အဆိုအရ ကင်ဆာအကြိတ်အဖုတွေရဲ့ DNA နဲ့ ပရိုတိန်းပြောင်းလဲမှုကနေ သွေးအတွင်းကို အလွန်သေးငယ်တဲ့ ဓာတ်ပစ္စည်းများ လွှတ်ထုတ်ပါတယ်။ CancerSEEK လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ သွေးစစ်ဆေးမှုက ကင်ဆာရောဂါ ၈ မျိုးမှာ တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ မျိုးဗီဇ ၁၆ ခုကို ရှာဖွေစစ်ဆေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ CancerSEEK စစ်ဆေးမှုကို သားအိမ်၊ အသည်း၊ အစာအိမ်၊ ပန်ကရိယ၊ အစာပြွန်၊ အူမကြီး၊ အဆုတ်နဲ့ ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်နေပြီး ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အခြားတစ်ရှူးတွေထံ ကင်ဆာဆဲလ်များ ပျံ့နှံ့ခြင်းမရှိသေးတဲ့ လူနာ ၁,၀၀၅ ဦးမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ စစ်ဆေးမှုရလဒ်က ကင်ဆာရေဂါ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းကို တွေ့ရှိနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
"ကင်ဆာရောဂါကို အခုလို ကနဦးအဆင့်မှာ စောစီးစွာ စစ်ဆေးသိရှိနိုင်မှုက အလွန်အရေးပါပါတယ်" လို့ ဂျွန်စ်ဟော့ပ်ကင်းတက္ကသိုလ် ဆေးပညာဌာနမှ ဒေါက်တာ ခရစ္စတီယန် တိုမတ်ဆတ်တီက ပြောပါတယ်။
"ဒီလို စစ်ဆေးသိရှိနိုင်မှုက ကင်ဆာကြောင့် သေဆုံးနေရမှုတွေအပေါ် အလွန်ကြီးမားတဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိနိုင်တယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်" လို့လည်း ဒေါက်တာခရစ္စတီယန်က ဆိုပါတယ်။
ကင်ဆာရောဂါကို စောစီးစွာ သိရှိပါ ကုသနိုင်ရန် အခွင့်အရေးပိုများကြောင်းလည်း ပညာရှင်တွေက ပြောထားပါတယ်။ လကိရှိအချိန်ထိ ကမ္ဘာမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကင်ဆာရောဂါ ၈ မျိုးအနက် ၅ မျိုးဟာ ကနဦးအဆင့်မှာပင် စောစီးစွာ စစ်ဆေးသိရှိနိုင်ခြင်း မရှိကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် ပန်ကရိယကင်ဆာဟာ ရောဂါလက္ခဏာ အနည်းငယ်မျှသာ ပြသလေ့ရှိပြီး အလွန်နောက်ကျပြီးမှသာ သိရှိနိုင်တာကြောင့် ရောဂါဖြစ်ပွားသူ ငါးဦးအနက် လေးဦးဟာ စစ်ဆေးသိရှိရတဲ့ နှစ်အတွင်းမှာပင် သေဆုံးလေ့ရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့် သိပ္ပံပညာရှင်တွေ စမ်းသပ်ခဲ့တဲ့ ကင်ဆာရောဂါအတွက် သွေးစစ်ဆေးမှုဟာ ဆေးပညာနယ်ပယ်မှာ အကြီးမားဆုံး ရည်မှန်းချက်တစ်ခုရောက်ဖို့ ခြေတစ်လှမ်း ပိုမိုနီးစပ်လာပြီလို့ ဆိုရမှာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ကင်ဆာရောဂါက လူထုကျန်းမာရေးကို ခြိမ်းခြောက်မှုရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ အမျိုးသမီးတွေမှာ ရင်သားကင်ဆာ၊ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ၊ အူမကြီးကင်ဆာနဲ့ သားဥအိမ်ကင်ဆာတို့ ဖြစ်ပွားမှုများတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အမျိုးသားတွေမှာတော့ အဆုတ်ကင်ဆာ၊ ပါးစောင်ကင်ဆာ၊ ခံတွင်းကင်ဆာနဲ့ အူမကြီးကင်ဆာတို့ အဖြစ်များတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၂၀၁၅ နဲ့ ၂၀၁၆ ခုနှစ် စာရင်းတွေအရ ကင်ဆာရောဂါဌာနသို့ လာရောက်ပြသသူ တစ်နှစ်လျှင် ၉,၀၀၀ ခန့်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရင်သားကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုဟာ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ပိုမိုများပြားလာကြောင်းလည်း ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး ဓာတ်ရောင်ခြည်ကင်ဆာဌာနရဲ့ စာရင်းတွေက ဖော်ပြပါတယ်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ ရင်သားကင်ဆာ လူနာကိုးရာကျော်သာရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာတော့ ၁,၃၀၀ ကျော်ရှိလာခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး လူနာမှတ်တမ်းအရ သိရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်ပွားမှုဟာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ ၉၁၃ ဦး၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ ၉၈၈ ဦး၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ ၁,၃၆၀ ဦး၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ ၁,၂၄၈ ဦးနဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ ၁,၃၅၄ ဦးရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒ့ါအပြင် ရင်သားကင်ဆာဟာ အမျိုးသမီးတွေမှာသာ အဖြစ်များခဲ့ရာက မြန်မာအမျိုးသားများမှာလည်း ဖြစ်ပွားမှုတွေ ရှိလာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးရဲ့ စာရင်းတွေအရ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှစပြီး အမျိုးသားတစ်ဦး၊ ၂၀၁၄ နဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တို့မှာ အမျိုးသားခြောက်ဦးအထိ ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်ပွားမှုရှိလာခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရင်သားကင်ဆာကို စောစီးစွာသိရှိပြီး ကုသပါက ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း ပျောက်ကင်းနိုင်ခြေရှိကြောင်း ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး ဓာတ်ရောင်ခြည်ကင်ဆာဌာန ပါမောက္ခ ဒေါက်တာခင်ချိုဝင်းက ယမန်နှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ရင်သားကင်ဆာဟာ ရောဂါအ ဆင့်(၁) ဆိုပါက ပျောက်ကင်းနိုင် ခြေ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ အဆင့်(၂) တွင် ပျောက်ကင်းနိုင်ခြေ ၆၅ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၇၀ ရာ ခိုင်နှုန်း၊ အဆင့်(၃) တွင် ပျောက် ကင်းနိုင်ခြေ ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အဆင့်(၄)တွင်မူ ပျောက်ကင်းနိုင် ခြေ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
ထိုအခြေအနေတွေအရ ဗြိတိန်သိပ္ပံပညာရှင်တွေ စမ်းသပ်ခဲ့တဲ့ CancerSEEK နည်းလမ်းဖြင့် တစ်နှစ်တစ်ကြိမ် သွေးစစ်ဆေးကာ ရင်သားကင်ဆာကို စောစီးစွာသိရှိနိုင်ပါက ကုသပျောက်ကင်းနိုင်မယ့် အလားအလာကောင်းတွေ ရှိနေပါတယ်။
ကင်ဆာကို ကိုယ်တွေ့ကြုံရသူက ဘာပြောလဲ?
ကင်ဆာဆိုတာက အရေပြား၊ ရင်သား၊ ခံတွင်းတို့လို သိသာမြင်သာတဲ့ နေရာတွေမှာဖြစ်ရင် အတွင်းပိုင်း ကလီစာတွေမှာ ဖြစ်တာထက် စောစောစီးစီးသိနိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်း ပိုများပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းမှာ ဖြစ်ရင်ကျတော့ များသောအားဖြင့် နောက်ကျပြီးမှ သိရတတ်တော့ ကုရတာ သိပ်မလွယ်ဘူး။
အခု သွေးစစ်ရုံနဲ့ စောစောသိနိုင်မယ့် ကင်ဆာအမျိုးစား ၈ မျိုးထဲမှာ အသည်းတို့ ပန်ခရိယတို့လို ကင်ဆာမျိုးတွေပါ ပါနေတော့ ဝမ်းသာစရာပေါ့ဗျာ။ ဆေးပညာတိုးတက်လာတာရဲ့ အကျိုးကျေးဇူး တွေပေါ့။ သွေးစစ်ရုံနဲ့ သိနိုင်တဲ့ နည်းပညာ ဒီနိုင်ငံကိုလည်းရောက်လာရင် အတိုင်းအထက်အလွန်ပါပဲ။
မြန်မာမှာ ကင်ဆာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကင်ဆာရောဂါကို လူထုအသိပညာပေးခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း၊ ကာကွယ်ခြင်းတို့ကို စီမံကိန်းများ ချမှတ်ဆောင်ရွက်နေပြီး ကုသရေးအပိုင်းမှာလည်း တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးအတွင်း ကင်ဆာလူနာဆောင်တစ်ခု တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာ ကင်ဆာရောဂါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဓာတ်ရောင်ခြည်စက်လေးလုံးဖြင့် နေ့စဉ် အတွင်းလူနာ ၃၀၀ ကျော်ကို ဆေးကုသပေးနေကြောင်း ယမန်နှစ် အောက်တိုဘာလအတွင်းက သတင်းတစ်ပုဒ်မှာ ရေးသားထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကင်ဆာရောဂါကို ဓာတ်ကင်ကုသပေးနိုင်တဲ့ အစိုးရဆေးရုံကြီးများမှာ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မန္တလေး ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးနှင့် နေပြည် တော်ခုတင် ၁,၀၀၀ ဆေးရုံကြီးတို့ ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသို့ မွန်ပြည်နယ်၊ တနင်္သာရီ၊ ဧရာဝတီနှင့် ပဲခူးတိုင်း တို့မှ လူနာများ အများဆုံး လာရောက်ပြသလေ့ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဗြိတိန်သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ CancerSEEK သွေးစစ်ဆေးမှုကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ ချက်ချင်း အသုံးပြုနိုင်မှာ မဟုတ်သေးပေမဲ့ ကင်ဆာကို စောစီးစွာသိရှိ ကုသနိုင်ပြီး သေဆုံးမှုတွေ ရပ်တန့်နိုင်မယ့် မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်သမ်းလာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
Ref: 7Day Daily, Wikipedia, BBC